TAKAITRAN’NY KRIZY PÔLITIKA :: Olona telonjato sy arivo nanao fangatahana fanonerana • AoRaha
TAKAITRAN’NY KRIZY PÔLITIKA Olona telonjato sy arivo nanao fangatahana fanonerana
Tamin’ny tatitry ny asa vitan’ny Filan­kevitry ny fampihavanana malagasy na FFM nandritra ity taona ity teny Ampefiloha, omaly, dia fantatra fa miisa telonjato sy arivo ireo olona nanao fangatahana fanonerana vokatry ny krizy pôlitika. Nahatonga antontan-taratasy fangatahana eny anivon’ny rafitra ity ireo lasibatry ny krizy pôlitika ireo.
Ny dosie zato no efa vita fandinihana. Mitady vola amin’ireo firenen-dehibe sy ny Firenena Mikambana ny FFM mba hanomezana ny volan’ireo olona nanao
Ankoatra ireo rava orinasa sy potika fananana nandritra ireo krizy teto amin’ny firenena dia nahitana ireo gadra pôli­tika ihany koa tamin’ireo mpangataka fanonerana teny anivon’io rafitra io. Noho ny fahasarotan’ny fandinihana ny antontan-taratasin’izy ireo no voalaza fa antony nahavi­tsy ireo raharaha voadinika hatreto. Ny Vondrona Eoropea­nina, ny Vondrona Afrikanina, ny Sinoa, i Afrika Tatsimo ary ny Maraokana no samy voa­tonona avokoa fa isan’ireo firenena nangatahan’ny FFM vola. Nivoitra ireo nandritra ny fanokafana ny fivoriana ara-potoana fahatelon’ity rafi-panjakana teny Ampefiloha ity, omaly maraina.
Ankoatra izay, nilaza ny hanamafy ny vokatra efa azo tamin’ny asa fametrahana ny fitoniana teto amin’ny firenena nandritra na taorian’ny fifidianana filoham-pirenena farany teo, ry zareo.
Tsangan-tanana amin’ny famotsoran-keloka
“Efa nisy ny vokatra azo tamin’iny fifidianana filoham-pirenena iny fa mila hamafisina izany. Hidina any amin’ny faritra niaviany avy ireo mpikambana ato amin’ny FFM hametraka sy hitandro hatrany izany fitoniana izany. Hotohizana ihany koa ny fiaraha-miasa amin’ireo mpiara-miombon’antoka amin’ny zotram-pifidianana toy ny Voamieram-pirenena mahaleo­tena misahana ny fifidianana, ny fiaharamonim-pirenena, ny Rohy, ny Transparency international sy ny sisa”, hoy i Maka Alphonse, filohan’ny FFM
Isan’ny anjara andraikitr’ izy ireo ny momba ny fanomezana famotsoran-keloka. Voaresaka ny momba an’io teny Ampefiloha ka fantatra fa nisy olona enina amby telopolo ireo voaheloky ny Fitsarana noho ny raharaha pôlitika ka nanao nangataka famotsoran-keloka teny amin’ny FFM. “Efa naverina eny amin’ny Fitsarana Tampony ny fangatahan’ ireo olona ireo mba hakana fankatoavana eo amin’ny lafiny lalàna. Aorian’izay dia miverina aty aminay izany ary tapahina mandritra ny tsangan-tanana amin’ny fivoriam­ben’ny mpikambana rehetra ato aminay ny fahafantarana ny valin’ny fangatahan’ireo olona ireo”, hoy hatrany ny FFM.
FANAJANA NY ZON’OLOMBELONA :: Tsy ampy ny sakafon’ireo voafonja vehivavy eny Antanimora